စိတ်​ကူးနဲ့မုဒိမ်းကျင့်​ခံရခြင်း – Myanmar Breaking News
Homepage / All About Online / စိတ်​ကူးနဲ့မုဒိမ်းကျင့်​ခံရခြင်း
Facebookပေါ်မှာ မိန်းမသား တချို့ မှားယွင်းမှု တွေ နဲ့သာယာ နေကြတာ တွေ့ရတယ် ပုရိသ ကျားသဘာဝ ကိုနားမလည် ထင်ပေါ်မှု အတွက် မပေါ် ပေါ်အောင်ဖော်လို့… အဝတ် ဖလာ လေးတွေ နဲ့ဆယ်လီရူး ရူးနေကြပြန်တယ် ….
သမီးလှလာဟင့်… ဆိုတဲ့နောက်မှာ သားကောင်ရှာတဲ့ ကျားတချို့ပေးတဲ့ likeသိန်းချီ ရလို့ တဏှာရူးတွေ ရဲ့ အလှဘုရင်မ အဖြစ် မော့ကြွားနေကြပြန်တယ် ။
ညစ်ညမ်း မှုတွေ အောက်မယ် သား မယား အဖြစ်ဆဲဆိုခံနေရလည်း သူ့မ တို့ အတွက် စိတ်ထားကောင်းသူ ကြီးအဖြစ် ဖော်ပြလို့ မိမိ ရဲ့ အမှားတွေ ကို ပြုပြင်ဖို့ မကြိုးစာဘဲ ဖော်မြဲ ထုတ်ဖော်ပြမြဲ မို့စိတ်ကူးနဲ့ မုဒိမ်းကျင့် ခံနေရှာတယ်။
အကိတ်အကိတ်ဆိုတဲ့ ခေတ်စကားကြောင့်မိန်းမသားတချို onlineကို ဘဝထင် ဆယ်လီဆိုတဲ့ နာမ်စားလေးရဖို့ အပြိုင်အဆိုင် ဖော်ချွတ်လေးတွေ နဲ့ ပုရိသတွေ အတွက် စိတ်ကူးနဲ့ မုဒိမ်းကျင့်ခံနေရတဲ့ ဆယ်လီရူးတွေ များလာခဲ့တယ်။ မင်းသမီးတွေက ဖော်ချွတ် ဆယ်လီရူး ငပိန်းမတွေ က အကုန်ဖော်ထုတ်လို့ဖာဆန်ဆန်စရိုက်ပျက်တွေ နဲ onlineဆိုတာ သားကောင်းရှာတဲ့ ပုရိသကျားတွေ အတွက် ပိုက်ဆံပေးစရာမလို Freeမုဒိမ်းကျင့်လို့ရနေခဲ့ပြန်တယ်။
သမီးလှလာဟင့် ဆိုတဲ့ စကား နဲ့ပုရိသတွေ ကိုယ့်ချုပ်…ရင်လေးကိုဖော် တင်းလေးကော့လို့ဆယ့်နှစ်ကြိုးကဝေ နည်းတွေနဲ့ ပြုစား အမြီးလေးနန့်အညှီအဟောက်ကြိုက်တဲ့ တဏှာရူး ခွေးတစ်အုပ်ရဲ့ အားပေးမှုအောင်မယ် ။တော်တော်ခရီးပေါက်လို့ အော် ငါ့ညီမလေး များကငွေပေးစရာမလိုတဲ့ online …ဆိုလာဘဲ—။
ငါ့က တော့ Facebook ဆယ်လီ ကွ ဆိုတဲ့ မာန် နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ့် အလှဘုရင်မ တစ်ပါးလိုထင်ပြီးLike တွေ ပေါ်မယ် ဂုဏ်ယူ နေတဲ့ ပန်းလေး သို့ရေစာပေ ။ ရသ။ သုတ။ တွေ လေ့လာရမယ့်ချိန်like ပေးသူများ အတွက် cbမှာအချိန် ဖြုန်းလို့တစ်နေ့တာ onlineတက်ချိန် ညီမလေးတို့( ဘာ) ပညာတွေ တိုးပွားခဲ့လဲ?
တကယ်ခေတ်မှီ ပြီး ဆိုရှယ် ကျတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ က မိတ်ကပ်နဲ့မျက်နှာဆေးခြယ်ပြီး သမီးလှလာဟင့် ဆိုတဲ့ စကား မမေး ခဲ့ဘူး။ထက်မြက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေ့ က online ကိုဘဝအောင်မြင်မှု့ အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဘယ်လို နေထိုင်သင့်တယ်ဘယ်လိုတိုးတက်ပြောင်းလဲနေတယ် ဆိုတာပဲ အဓိက ထားပြီး စာပေ။ ရသ ။ သုတ နည်းပညာ တွေ အာရုံထားတက်ကြတယ် ။
မိန်းမကောင်း မိန်းမမြတ်တွေ က Online ပေါ်က လှတယ် ချောတယ် ဆိုတဲ့ တဒင်္ဂ သာယာမှု့ အတွက်အစဉ်အမြဲထိန်းသိမ်းထားတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ကို ချနင်းပြီ ကျော်ကြားမှု့ ကို မမက်မောဘူး ။ အစားအသောက် တွေအတွက် ၅ စက္ကန့် စည်းမျဉ်း မိန်းမသား သဘာဝ လှတယ် ချောတယ် ဆိုတဲ့စကား မိန်းမသားတိုင်း သဘောတွေ့ ပေမဲ့ အလှတရား ဆိုတာ ဘဝ တစ်ခုလိုသတ်မှတ်မထားဘူး
မိန်းမသား တိုင်းရဲ့ မရှိလည်းဖြစ်တဲ့..လိုအပ်ချက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အဖြစ် အလှချယ်သလို့နေထိုင်ကြတယ် မိမိ အလှကရမ္မက်အနေနဲ့အသွင်ပြောင်း မယူဘူး။ပုရိသ တွေ အတွက် စိတ်ကူးနဲ့တစ်ညအပန်းဖြေဖို့ အတွက် အလှပြင်တာမဟုက်ဘူး ။နှာဘူးအကြိုက် လိုက်ပြီး မိမိ ရှိတာတွေ ဖော်ပြရင်တော့ ယောင်္ကျား သဘာဝ ပါးစပ်ကလေးစိုက် ချစ်ခွင့်ပန်ပြီးရရင်အမြတ် မရရင် အရင်းဆိုပြီး ရိတဲ့တဲ့ အပြောခံအကြည့်ခံ မစစ်မှန်တဲ့ အချစ်တွေနဲ့ အရွေးချယ်ခံရဖို့ သေချာနေပြီးမို့—
ပန်းလေးသို့ရေ … စိတ်ကူး နဲ့မုဒိမ်းကျင့်ခြင်း ခံရတဲ့ဘဝ မရောက် စေနဲ့ကွယ် ဆယ်လီဆိုတာဂုဏ်ယူစရာမဟုက်တဲ့နာမ်စားတစ်ခုပါ—။
Facebookပျေါမှာ မိနျးမသား တခြို့ မှားယှငျးမှု တှေ နဲ့သာယာ နကွေတာ တှရေ့တယျ ပုရိသ ကြားသဘာဝ ကိုနားမလညျ ထငျပျေါမှု အတှကျ မပျေါ ပျေါအောငျဖျောလို့… အဝတျ ဖလာ လေးတှေ နဲ့ဆယျလီရူး ရူးနကွေပွနျတယျ ….
သမီးလှလာဟငျ့… ဆိုတဲ့နောကျမှာ သားကောငျရှာတဲ့ ကြားတခြို့ပေးတဲ့ likeသိနျးခြီ ရလို့ တဏှာရူးတှေ ရဲ့ အလှဘုရငျမ အဖွဈ မော့ကွှားနကွေပွနျတယျ ။
ညဈညမျး မှုတှေ အောကျမယျ သား မယား အဖွဈဆဲဆိုခံနရေလညျး သူ့မ တို့ အတှကျ စိတျထားကောငျးသူ ကွီးအဖွဈ ဖျောပွလို့ မိမိ ရဲ့ အမှားတှေ ကို ပွုပွငျဖို့ မကွိုးစာဘဲ ဖျောမွဲ ထုတျဖျောပွမွဲ မို့စိတျကူးနဲ့ မုဒိမျးကငျြ့ ခံနရှောတယျ။
အကိတျအကိတျဆိုတဲ့ ခတျေစကားကွောငျ့မိနျးမသားတခြို onlineကို ဘဝထငျ ဆယျလီဆိုတဲ့ နာမျစားလေးရဖို့ အပွိုငျအဆိုငျ ဖျောခြှတျလေးတှေ နဲ့ ပုရိသတှေ အတှကျ စိတျကူးနဲ့ မုဒိမျးကငျြ့ခံနရေတဲ့ ဆယျလီရူးတှေ မြားလာခဲ့တယျ။ မငျးသမီးတှကေ ဖျောခြှတျ ဆယျလီရူး ငပိနျးမတှေ က အကုနျဖျောထုတျလို့ဖာဆနျဆနျစရိုကျပကျြတှေ နဲ onlineဆိုတာ သားကောငျးရှာတဲ့ ပုရိသကြားတှေ အတှကျ ပိုကျဆံပေးစရာမလို Freeမုဒိမျးကငျြ့လို့ရနခေဲ့ပွနျတယျ။
သမီးလှလာဟငျ့ ဆိုတဲ့ စကား နဲ့ပုရိသတှေ ကိုယျ့ခြုပျ…ရငျလေးကိုဖျော တငျးလေးကော့လို့ဆယျ့နှဈကွိုးကဝေ နညျးတှနေဲ့ ပွုစား အမွီးလေးနနျ့အညှီအဟောကျကွိုကျတဲ့ တဏှာရူး ခှေးတဈအုပျရဲ့ အားပေးမှုအောငျမယျ ။တျောတျောခရီးပေါကျလို့ အျော ငါ့ညီမလေး မြားကငှပေေးစရာမလိုတဲ့ online …ဆိုလာဘဲ—။
ငါ့က တော့ Facebook ဆယျလီ ကှ ဆိုတဲ့ မာနျ နဲ့ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ့ အလှဘုရငျမ တဈပါးလိုထငျပွီးLike တှေ ပျေါမယျ ဂုဏျယူ နတေဲ့ ပနျးလေး သို့ရစောပေ ။ ရသ။ သုတ။ တှေ လလေ့ာရမယျ့ခြိနျlike ပေးသူမြား အတှကျ cbမှာအခြိနျ ဖွုနျးလို့တဈနတေ့ာ onlineတကျခြိနျ ညီမလေးတို့( ဘာ) ပညာတှေ တိုးပှားခဲ့လဲ?
တကယျခတျေမှီ ပွီး ဆိုရှယျ ကတြဲ့ အမြိုးသမီးတှေ က မိတျကပျနဲ့မကျြနှာဆေးခွယျပွီး သမီးလှလာဟငျ့ ဆိုတဲ့ စကား မမေး ခဲ့ဘူး။ထကျမွကျတဲ့အမြိုးသမီးတှေ့ က online ကိုဘဝအောငျမွငျမှု့ အတှကျ ပတျဝနျးကငျြနဲ့ဘယျလို နထေိုငျသငျ့တယျဘယျလိုတိုးတကျပွောငျးလဲနတေယျ ဆိုတာပဲ အဓိက ထားပွီး စာပေ။ ရသ ။ သုတ နညျးပညာ တှေ အာရုံထားတကျကွတယျ ။
မိနျးမကောငျး မိနျးမမွတျတှေ က Online ပျေါက လှတယျ ခြောတယျ ဆိုတဲ့ တဒင်ျဂ သာယာမှု့ အတှကျအစဉျအမွဲထိနျးသိမျးထားတဲ့ ဂုဏျသိက်ခာ ကို ခနြငျးပွီ ကြျောကွားမှု့ ကို မမကျမောဘူး ။ အစားအသောကျ တှအေတှကျ ၅ စက်ကနျ့ စညျးမဉျြး မိနျးမသား သဘာဝ လှတယျ ခြောတယျ ဆိုတဲ့စကား မိနျးမသားတိုငျး သဘောတှေ့ ပမေဲ့ အလှတရား ဆိုတာ ဘဝ တဈခုလိုသတျမှတျမထားဘူး
မိနျးမသား တိုငျးရဲ့ မရှိလညျးဖွဈတဲ့..လိုအပျခကျြတဈစိတျတဈပိုငျး အဖွဈ အလှခယျြသလို့နထေိုငျကွတယျ မိမိ အလှကရမ်မကျအနနေဲ့အသှငျပွောငျး မယူဘူး။ပုရိသ တှေ အတှကျ စိတျကူးနဲ့တဈညအပနျးဖွဖေို့ အတှကျ အလှပွငျတာမဟုကျဘူး ။နှာဘူးအကွိုကျ လိုကျပွီး မိမိ ရှိတာတှေ ဖျောပွရငျတော့ ယောင်ျကြား သဘာဝ ပါးစပျကလေးစိုကျ ခဈြခှငျ့ပနျပွီးရရငျအမွတျ မရရငျ အရငျးဆိုပွီး ရိတဲ့တဲ့ အပွောခံအကွညျ့ခံ မစဈမှနျတဲ့ အခဈြတှနေဲ့ အရှေးခယျြခံရဖို့ သခြောနပွေီးမို့—
ပနျးလေးသို့ရေ … စိတျကူး နဲ့မုဒိမျးကငျြ့ခွငျး ခံရတဲ့ဘဝ မရောကျ စနေဲ့ကှယျ ဆယျလီဆိုတာဂုဏျယူစရာမဟုကျတဲ့နာမျစားတဈခုပါ—။
Previous post ဒေါင်း သဘာဝ အကျင့် စရိုက်
Next post “ခရီးသွားကြတဲ့အခါ မှောင်လာရင်ကားပေါ်မှာ ကင်မရာတွေနဲ့ ဟိုရိုက်၊ ဒီရိုက်မလုပ်မိကြပါစေနဲ့။´´